Iza avy no azo mangataka izany?
- Ny tompon’anarana efa feno taona sy manana karapanondro
- Ny ray aman-drenin’ilay tompon’anarana tiana ovaina
Inona avy ireo zavatra ilaina?
- Dika mitovy amin’ny fangatahana fanovàna anarana, mipetaka eny amin’ny fitsaràna.
- Vavolombelona 5 miaraka amin’ny karapanondro sy fanamarinam-ponenan’ny tsirairay.
- Ho an’ilay olona hovaina anarana : Kopia naterahana, Casier judiciaire (raha mihoatra ny 13 taona).